पहाडतर्फ लम्कँदै लहरे वनमारा- विविधा - कान्तिपुर समाचार
पहाडतर्फ लम्कँदै लहरे वनमारा
भाद्र २८, २०७६ भरतबाबु श्रेष्ठ
लहरे वनमारा द्रुतगतिमा फैलन सक्ने अत्यन्त हानिकारक मिचाहा वनस्पति हो । छिटो फैलन सक्ने र उच्च वृद्धिदर भएकोले नै यस वनस्पतिलाई अंग्रेजीमा माइल्स अ मिनेट नामले चिनिन्छ । यस्ता वनस्पतिहरूको प्रचुरता आफ्नो प्राकृतिक वासस्थान रहेको भौगोलिक क्षेत्रहरूमा भने तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ ।
ती क्षेत्रहरूमा यस्ता वनस्पतिहरूको शत्रुहरू जस्तै– पात खाने किराहरू, रोग लगाउने ढुसीहरू एवं अन्य सूक्ष्म जीवहरू पनि हुने भएकाले ती वनस्पतिहरूको वृद्धि तथा फैलावट पनि कम हुन्छ । तर मानिसका विभिन्न क्रियाकलापहरू जस्तै– कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनहरूको अन्तरदेशीय व्यापार र ठूलो संख्यामा पर्यटकहरूको आवागमनको कारण यस प्रकारका वनस्पति आफ्नो प्राकृतिक वासस्थान भन्दा बाहिरको भौगोलिक क्षेत्रमा पुग्छन् ।
धेरै वनस्पति प्रजातिहरू त कृषिबालीको रूपमा, घाँसको लागि एवं घर र बगैँचामा सजाउनका लागि तिनीहरूको प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बाहिर खेती गर्न लागिएको छ । आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदा वनस्पतिहरूको नयाँ ठाउँमा शत्रु नहुने वा कम हुने भएकोले कतिपयको वृद्धि एवं फैलावट अत्यन्त द्रुतगतिमा भई रैथाने वनस्पतिहरू पारिस्थितिकीय चक्र र अन्य वातावरणीय पक्षहरूलाई नकारात्मक असर पार्छ । यस्ता गैररैथाने हानिकारक वनस्पतिहरूलाई मिचाहा प्रजाति भनिन्छ ।
बढ्दो विश्वव्यापारीकरण र मानिसहरूको आवत–जावत एवं भूउपयोग र जलवायुमा आइरहेको परिवर्तनका कारण मिचाहा वनस्पति एवं जन्तु प्रजातिहरूका संख्या र तिनीहरूका हानिकारक असरहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन् । यस्ता वनस्पतिमध्ये विश्वमै अत्यन्त हानिकारक मानिएको एक मिचाहा प्रजाति हो, लहरे वनमारा ।
मध्ये तथा दक्षिण अमेरिकाको उष्ण जलवायु भएको भौगोलिक क्षेत्रको यस रैथाने वनस्पति अष्ट्रेलिया एवं एसियाका केही राष्ट्रमा भूक्षय नियन्त्रण एवं नाङ्गो माटो ढाक्न भित्र्याइएको थियो । ती राष्ट्रहरूबाट मानव क्रियाकलाप एवं प्राकृतिक माध्यमबाट छिमेकी राष्ट्रहरूमा यो लहरे वनमारा फैलने क्रम जारी छ । यो वनस्पति चियाको बेर्नासँगै भारतको सिक्किम/दार्जिलिङ क्षेत्रबाट नेपालको पूर्वी भागमा पहिलोपटक सन् १९६० को दशकमा भित्रिएको अनुमान गरिएको छ ।
सुरुका दिनहरूमा पूर्वी नेपालमा मात्र फैलिएको यस वनस्पति करिब पाँच दशकमा मध्यभाग हुँदै पश्चिमको लुम्बिनी क्षेत्र र दाङ उपत्यकासम्म फैलिइसकेको छ । पूर्वको कोशीटापु वन्यजन्तु आरक्षणमध्ये नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा लहरे वनमाराले रैथाने वनस्पति, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय चक्रमा पारेको नकारात्मक असरबारे थुप्रै अनुसन्धान भइसकेका छन् ।
मुख्यतया चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घाँसे मैदान एवं सिमसार क्षेत्रमा फैलिएको लहरे वनमाराले संकटापन्न एकसिंगे गैंडाको वासस्थान क्षयीकरण गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । अत्यन्त छिटो वृद्धि हुने र लहरा बनी जमिनको घाँस एवं साना रुखहरूलाई पूरै ढाक्ने भएकाले लहरे वनमाराको असर अन्य वनस्पतिहरूमा अत्यन्त बढी हुन्छ ।
लहरे वनमाराद्वारा ढाकिएका अन्य वनस्पतिहरूले आवश्यक मात्रामा सूर्यको प्रकाश नपाउने भएकाले प्रकाश संश्लेषणको दर कम भई धेरै वनस्पति मर्ने गर्छन् । यसबाट घाँसे मैदानमा घाँसको उत्पादन न्यून हुने भएकाले अन्य वन्यजन्तुहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । साथै रुखहरूको बिउको अंकुरणमा ह्रास आउने र साना बेर्नाहरू मर्ने भएकाले रुखहरूको पुनः उत्पादनमा पनि उल्लेख्य कमी ल्याइरहेको छ ।
केही वर्ष अघिसम्म मुख्यतया तराई र भित्री मधेस क्षेत्रमा मात्र पाइने लहरे वनमारा पछिल्लो समयमा मध्यपहाडी क्षेत्रमा पनि फैलिन थालेको छ । पूर्वमा धनकुटा बजारको क्षेत्र आसपासमा यस वनस्पति पाउन सकिन्छ । नेपालको मध्यभागमा पृथ्वीराज मार्ग अन्तर्गत मर्स्याङ्दी जलविद्युतको जलाशय र विद्युतगृह वरिपरिको क्षेत्र र धादिङ जिल्लाको सिम्ले र बैरेनी क्षेत्रमा लहरे वनमारा झार पाइएको छ ।
साथै पृथ्वीराजमार्गको बेनीघाटबाट बूढीगण्डकीको किनारै किनार आरुघाट जाने कच्ची बाटोको वरिपरि (गण्डकी गाउँपालिका–८ को बेसेरी भन्ने ठाउँ र फुजेलको ठूलो फाँट) पनि यो वनस्पति पाइएको छ । धादिङ बेँसी नजिकैको ससाहा भन्ने ठाउँमा पनि यो बिरुवा फैलिइसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा (पोखरा लेखनाथ–१४ मा रहेको फोहोर संकलन नजिक) मा पनि लहरे वनमारा पुगिसकेको छ । यिनीहरू त केही प्रतिनिधि स्थानहरू मात्र हुनसक्छन् । सूक्ष्म रूपमा सर्वेक्षण गर्ने हो भने पूर्व र मध्य नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा यो वनस्पति फैलिएको सम्भावना छ । यसबाट के देखिन्छ भने मिचाहा वनमारा दक्षिणमा अवस्थित तराई मधेसबाट उत्तरतर्फको हिमाली क्षेत्रतर्फ फैलिँदै गइरहेको छ ।
मुख्यतया सामान ओसार–पसार गर्दा सडकको सञ्जालमार्फत मध्यपहाडी क्षेत्रमा फैलिएको देखिन्छ । हालसम्म मध्यपहाडको केही क्षेत्रको सीमित ठाउँमा मात्र फैलिएको यो लहरे निकट भविष्यमै ठूलो क्षेत्रमा झांगिन सक्ने सम्भावना छ । यस वनस्पतिको लागि नदी र खोला वरिपरिको चिस्यान क्षेत्र बढी उपयुक्त हुने र हावाले यसको बिउ टाढा–टाढासम्म उडाएर लैजाने भएकोले सडक नपुगेका विकट ठाउँहरूमा पनि यो वनस्पति फैलन सक्छ ।
हिमाली क्षेत्रको उच्च भूभागमा हुने न्यून तापक्रमका कारण यो वनस्पति झांगिन नसक्ला, तर नदि किनार र अन्य तल्लो उचाइको भूभागमा फैलन सक्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि भइरहेकोले पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रका तल्लो उचाइका भूभागहरू लहरे वनमाराको लागि अनुकूल हुने सम्भावना छ । भौगोलिक विकटताका कारण समथर भूभागमा भन्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यस्ता मिचाह वनस्पतिहरूका व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तसर्थ पहाडी क्षेत्रमा फैलने क्रममा रहेको यस प्रारम्भिक अवस्थामा नै लहरे वनमाराको नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक छ ।
लहरे वनमारा एवं अन्य मिचाहा प्रजातिहरूको नियन्त्रणका लागि मुख्यतया भौतिक (यान्त्रिक), रासायनिक र जैविक नियन्त्रण विधिहरू अपनाइन्छ । कुनै पनि मिचाहा प्रजातिको जैविक नियन्त्रणका लागि त्यसको प्राकृतिक रैथाने वासस्थान नभएको भौगोलिक क्षेत्रमा पाइने शत्रुहरू मध्येबाट सावधानीपूर्वक केहीलाई छानेर भित्र्याउने गरिन्छ ।
यसका लागि लामो अनुसन्धान र जटिल प्रशासनिक (क्वारेन्टाइन) प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन लहरे वनमाराको लागि तत्काल सम्भव देखिँदैन । रासायनिक विधिमा झार मार्ने विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले अन्य वनस्पतिलाई पनि असर गर्ने र वातावरण प्रदूषित गर्ने भएकाले प्राकृतिक वातावरणमा यो विधि त्यति उपयुक्त मानिँदैन । लहरे वनमाराको मध्यपहाडी क्षेत्रमामाथि उल्लेख गरिएको अवस्थामा भौतिक विधि नै बढी उपयुक्त देखिन्छ । यस अन्तर्गत लहरे वनमारा नियन्त्रणका लागि निम्न क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ :
१. लहरे वनमारा फैलिएको क्षेत्रको सर्वेक्षण गरी उक्त वनस्पति पाइने सबै स्थल पहिचान एवं नक्साङ्कन गर्ने ।
२. लहरे वनमारा पाइएको स्थान आसपासका समुदायहरूलाई यसको फैलावटबाट भविष्यमा हुनसक्ने हानिबारे जानकारी गराउने ।
३. स्थानीय समुदाय र विद्यालय एवं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्वयं सेवकका रूपमा सहभागी गराई प्रत्येक स्थानमा सम्पूर्ण रूपले लहरे वनमारा फूल फुल्नु अगावै उखेलेर सोही ठाउँमा गहिरो खाडल खनी पुर्ने वा राम्ररी सुकाएर जलाइदिने । लहरे वनमारा बिउ र काण्ड दुवैबाट फैलने भएकाले बिरुवाका ती भागहरू अन्यत्र छरिनबाट बचाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
माथि उल्लेखित तेस्रो क्रियाकलाप सम्पन्न गरेपश्चात पनि सोही ठाउँमा लहरे वनमारा फेरि उत्तिकै उम्रने र फैलिएको देख्न सकिन्छ । माटोमा धेरै बिउहरू जम्मा भएको हुनसक्ने र डाँठका (काण्ड) टुक्राटुक्रीबाट पुनः उत्पादन हुनसक्छ । तर उखाल्ने, कुहाउने र जलाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनसकेमा क्रमशः यस झारको प्रचुरता घट्दै जान्छ । र अन्ततः ४–५ वर्षमा उक्त ठाउँबाट यसलाई सम्पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्न सकिन्छ । फैलिएको क्षेत्र ठूलो छ भने निर्मूल पार्न धेरै वर्ष लाग्न सक्छ ।
विभिन्न मुलुकको अनुभव नेपालकै तराई तथा मधेस क्षेत्रमा लहरे वनमाराले पारेको असर र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भविष्यमा पार्न सक्ने असरहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा यस झारको नियन्त्रण तत्काल थाल्नुपर्ने देखिन्छ । साथै पश्चिमतर्फको फैलावटलाई रोक्न पनि माथिका क्रियाकलाप आवश्यक छन् । तत्कालै लहरे वनमाराको व्यवस्थापन नगरिएमा केही दशकमा नै यो समस्या नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानेछ र हामीले दीर्घकालीन रूपमा जैविक विविधता एवं वातावरणीय सन्तुलनको क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ ।
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक हुन् । प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०८:१७
सामान्य डेंगुको उपचार घरमै
भाद्र २८, २०७६ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — विशेषज्ञहरूले हाल मुलुकमा डेंगु संक्रमण भएर सामान्य ज्वरो लगायतका लक्षण भएका बिरामीलाई नआत्तिई घरमै आराम गर्ने सल्लाह दिएका छन् । उनीहरूले जोखिम समूहमा रहेकाहरूबाहेक अन्य व्यक्तिलाई तत्कालका लागि डेंगुबाट खासै डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको समेत औंल्याएका हुन् ।
‘डेंगुको लक्षणसहित सामान्य ज्वरो आयो भने नआत्तिई चिकित्साकर्मीको सल्लाहमा घरमै स्वास्थ्य लाभ गर्न सकिन्छ,’ शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार ‘जोखिम समूह’ मा रहेकाहरूले भने हालको डेंगुको प्रकोप देखिएको अवस्थामा सामान्य ज्वरो देखिए पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यो जोखिम समूहअन्तर्गत बच्चा, बूढापाका, गर्भवती, दीर्घरोगी, पेप्टिक अल्सर भएका, मोटोपना भएका, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकाहरू पर्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को अनुसार यो संक्रमण फ्लुजस्तो बिरामीका कारण बन्छ र कहिलेकाहीँ सिभियर डेंगुजस्तो सम्भावित घातक जटिलतामा विकसित हुन सक्छ । सामान्य डेंगु र सिभियर डेंगुका लागि कुनै विशिष्ट उपचार नभए पनि चाँडै संक्रमण पत्ता लगाउनाले र उचित चिकित्सकीय रेखदेखले यसबाट हुने मृत्युदर एक प्रतिशतभन्दा तल झार्न सकिन्छ ।
उचित चिकित्सकीय रेखदेख, स्वास्थ्य सेवाको सुविधामा विस्तारले गर्दा हाल विश्वभरि नै डेंगु संक्रमणले हुने मृत्यु दर घट्दो छ । तर डेंगुको लामखुट्टे नियन्त्रणमा नरहेकाले रोगको प्रसार भने बढ्दो अवस्थामा छ । हाल प्रकोपकै रूपमा डेंगु देखिएकाले साधारण ज्वरो आउँदा ज्वरो/दुखाइ कम गर्न सिटामोल उपयोग गर्नुको साथै एस्प्रिन, ब्रुफिन जस्ता औषधि सेवन नगर्न टेकु अस्पतालकै डा.शेरबहादुर पुन आग्रह गर्छन् ।
एउटा सामान्य स्वस्थ व्यक्तिलाई डेंगुको लक्षणसहित सामान्य ज्वरो भए घरमै प्रशस्त पोसिलो झोल पदार्थ सेवनसँगै आराम गर्न सकिने औंल्याउँदै डा.पुन भन्छन्, ‘कडा र फरक प्रकारको ज्वरो आयो भने तुरुन्त अस्पतालमा जचाउने र चिकित्सकीय सल्लाहअनुसार गर्नुपर्छ ।’ तर हाल डेंगुको जोखिम समूहमा रहेका बच्चा, बूढापाका, दीर्घरोगी, गर्भवती, पेप्टिक अल्सर, मोटोपना भएकालाई ज्वरो देखिए विशेष ख्याल गर्नुपर्नेसमेत उनी बताउँछन् ।
यस्तै, इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी), किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख डा. प्रकाश शाहले तीन/चार दिनसम्म पनि ज्वरो कम नभए, वान्ता आए, शरीरमा फोका आए, जीउ, हाडजोर्नी साह्रै दुख्ने भए चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने बताए ।
घरमै स्वास्थ्य लाभ गर्दा
परिवारमा कसैलाई सामान्य डेंगु भएमा चिकित्सकको सल्लाहमा घरमै स्याहार गर्न सकिन्छ । तर यस्तो समय बिरामीमा देखिने लक्षणहरूलाई सावधानीपूर्वक निगरानी भने गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने डेंगु तेस्रो र सातौं दिनको बीचमा जतिखेर ज्वरो हट्छ, छिट्टै गम्भीर रूपसमेत लिन सक्छ ।
अमेरिकास्थित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) का अनुसार डेंगु बिरामीहरूलाई ज्वरो हुँदाताका सकेसम्म आराम गर्नुपर्छ । यस्तै, उच्च ज्वरोलार्ई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । उच्च ज्वरो नियन्त्रणका लागि ‘इबुब्रुफेन’, ‘एस्प्रिन’ भएका औषधि लिन हुँदैन । ज्वरो कम गर्न आवश्यकता भए हरेक ६ घण्टामा ‘पारासिटामोल’ औषधि एक दिनमा अधिकतम ४ मात्रा दिन सकिन्छ । यदि उच्च ज्वरो रही नै रहे टाउकोमा पानीपट्टी वा कपडालाई पानीले भिजाएर पुनः निचोरेर बिरामीको शरीरमा पुछ्न सकिन्छ ।
सीडीसीका अनुसार बिरामीको शरीरमा पानीको कमी हुन दिनुहुन्न । शरीरमा पानीको कमी भएको लक्षणहरूमा निरन्तर ध्यान दिनुपर्छ किनभने यो अवस्थामा ज्वरो, वान्ता वा पर्याप्त तरल पदार्थ सेवन नगरे बिरामीको शरीरको तरल पदार्थमा धेरै मात्रामा कमी आउँछ । यसैले डेंगुको बिरामीलाई प्रशस्त मात्रामा तरल पदार्थ र पानी दिनुपर्छ ।
डेंगु बिरामीको ज्वरो गइसके पनि यो चरण केही बिरामीका लागि खतरनाक हुन सक्छ । घरमा भएको बिरामीको जसरी ज्वरो समाप्त हुन्छ, त्यसमा देखिन सक्ने चेतावनीको संकेतहरूको निगरानी गर्नुपर्ने सीडीसीले जनाएको छ । डेंगुको लक्षण देखिएको ३ देखि ७ दिनपछि ज्वरो घटेपछि चेतावनीको संकेत हेर्नुपर्छ ।
यी चेतावनीको संकेतअन्तर्गत बिरामीलाई गम्भीर पेट दुखाइ वा निरन्तर वान्ता, छालामा रातो बिमिरा वा प्याच, नाक र गिजाबाट रक्त श्राव, रगतसहितको वान्ता वा दिसामा पनि रगत, तन्द्रा वा चिटचिडाहट, रूखो, चिसो छाला देखिए तुरुन्त अस्पताल पुर्‍याउनुपर्छ ।
घरमा भएका डेंगु संक्रमितलाई लामखुट्टेले टोकेर संक्रमित भई अन्य व्यक्तिलाई समेत रोग सार्न सक्छ । यसैले बिरामीलाई झुलभित्र सुताउनुपर्छ । अन्य स्वस्थ व्यक्तिलाई लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । घरमा भएको लामुखुट्टेलाई मार्नुको साथै पानी जमेको ठाउँ सफा गर्नुपर्छ ।
सातामा एकपटक घरको निरीक्षण गरौं
डेंगुको लामखुट्टे मात्र सफा पानीमा बस्छ । यदि सफा पानी केही दिनका लागि जम्मा भएको छ र त्यसलाई फेरिएन भने त्यो सफा पानीमा डेंगुको फुल उत्पन्न हुन्छ । फुल ८ देखि १० दिनभित्र डेंगु फैलाउने लामखुट्टेमा परिवर्तित हुन्छन् । हामीले ८ दिनभन्दा अघि नै त्यो पानीलाई परिवर्तन गरेर त्यो फुललाई नष्ट गर्दा डेंगु फैलाउने लामखुट्टे उत्पन्न हुँदैनन् ।
यस्तो प्रक्रिया दिनहुँ गरे सबैभन्दा राम्रो तर अधिकतम सातामा एकपटक बिदाको दिन करिब १०–१५ मिनट घर र छेउछाउलाई अवलोकन गरेर गमला, बट्टा, खाल्डाखुल्डी आदिमा सफा पानी जमेको भए यसलाई हटाउँदा वा फेर्दा डेंगु नियन्त्रणमा धेरै सकारात्मक पाइला हुन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका वरिष्ठ किट विज्ञानका डा. बीएन नागपाल बताउँछन् ।
यस्तै, घर छेउको खाल्डाखुल्डीको पानी हटाउन नसके त्यसमा मट्टितेल, डिजेल आदि हाल्दा लामखुट्टे बाँच्न सक्दैनन् । यो लामखुट्टेले एक पटकमा ८० देखि १४० फुल एक ठाउँमा नभई थुप्रै पानी जमेको स–सानो स्थानमा पार्ने गरेको छ । यसैले यसको प्रजनन् स्थल एक ठाउँमा मात्र नभएर थुप्रै ठाउँमा हुँदा खोजेर मास्दासमेत केही फुल, लार्भा आदि जीवित रहने सम्भावना कायमै रहन्छ ।
अझ डेंगु सार्ने लामखुट्टेले नाली, फोहोर, ठूलो तलाउ आदिमा नभए मुख्य रूपमा घरभित्रै वा बाहिर भएको बट्टा, गमला, टायर आदि पानी भएको ठाउँमा फुल पार्छ । एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म जीवित रहन सक्ने यो फुल पानीको सम्पर्कमा आउना साथ लामखुट्टे उत्पन्न हुन्छ ।
यसैले चलाख डेंगु लामखुट्टेलार्ई जित्न हरेक साता एक घण्टा घर र छेउछाउमा रहेको राम्ररी नछोपिएको पानीलाई खाली गर्नुपर्ने औंल्याउँदै डा.नागपालले भनेका छन्, ‘यही प्रक्रिया अपनाएर बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतका मुलुक यो रोगविरुद्घको लडाइँ जितिरहेका छन् भने तपाईंहरू किन सक्नुहुन्न ? ’
एडिस एजेप्टी लामखुट्टे
मुलुकमा डेंगु फैलाउने मुख्य रूपमा जिम्मेवार मानिएको एडिस लामखुट्टे चारैतिर छ । यो प्रजाति मात्र त्यो वातावरणमा हुर्किन सक्छन्, जहाँको तापक्रम १६ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन्छ ।
हामीले पोथी एडिस एजेप्टी लामखुट्टेलाई सजिलै चिन्न सक्छौं । यसको शरीरमा खैरा धर्सा हुन्छन् । यो धेरै बढी उचाइसम्म उड्न सक्दैन ।
इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका भेक्टर कन्ट्रोल इन्सपेक्टर उत्तमराज प्याकुरेलका अनुसार, वयस्क लामखुट्टेको आयु करिब एक महिनाको हुन्छ । यो लामखुट्टेले उज्यालोमा र दिउँसो बढी टोक्ने हुनाले रगत चुस्नका लागि बाधा पुग्ने हुँदा पूरा रगत खान धेरैजनालाई टोक्ने गरेको छ ।
यो लामखुट्टे सफा पानी जमेको ठाउँ जस्तो बाटा, टायर, बाल्टिन, गमला, एयर कन्डिसनर, थोरैभन्दा थोरै पानी जम्ने बिर्को, पानी जम्मा भएको खुला ट्यांकीमा फुल पारेर आफ्नो वंशवृद्घि गर्छ ।
तर यसको फुल पार्ने प्रक्रिया पनि वंशवृद्घिमा सघाउने खालको अनौठो रहेको छ । यसले सफा पानी जमेको एउटै ठाउँमा सबै फुल पार्दैन । थोरैथोरै गरी तीन–चार ठाउँमा फुल पार्छ ।
वयस्क लामखुट्टेले आफ्नो जीवनकालमा हरेक ३–३ दिनमा ७ देखि ९ पटक गरी एकपटकमा एक सयदेखि डेढ सयसम्म फुल पार्छ । संक्रमित लामखुट्टेले पार्ने फुलबाट उत्पन्न सबै लामखुट्टे संक्रमित अर्थात् डेंगु रोग सार्ने क्षमताका हुन्छन् ।
यो लामखुट्टै धेरै टाढासम्म जान सक्दैन । यो एक पटकमा एक सय मिटरदेखि आधा किलोमिटर टाढासम्म उड्न सक्छ । तर यस्तो उडाइमा हावाको बहावले साथ दिए लामखुट्टे यसभन्दा टाढासमेत पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । यो लामखुट्टेको वृद्घि र विकास घरवरिपरि वा करिब सय मिटरको परिधिमा हुने गरेको छ ।
बिरामीमा यी लक्षण देखिए तुरुन्त अस्पताल
ज्वरो रहँदा देखिने खतराको संकेत
पिसाबको मात्रामा कमी आए
बच्चा रुँदा धेरै कम वा आँसु नै नआए
मुख, जिब्रो वा ओठ सुक्खा भए
धेरै चिढिएको, अलमलिएको भए
प्रतिमिनेट १ सय वा योभन्दा बढी मुटुको चाल भएमा
हाल डेंगु ज्वरोका लागि कुनै मान्यता प्राप्त खोप उपलब्ध छैन । यसैले यो संक्रमणको जोखिम भएका ठाउँका बासिन्दा र त्यहाँ यात्रा गर्नेहरूले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
डेंगु संक्रमणको जोखिम भएको ठाउँमा सुरक्षात्मक लुगाफाटा उपयोग गर्नुपर्छ । हाफ पाइन्टभन्दा खुट्टा पूरा छोपिन लुगा र पूरा बाहुला भएको लुगाफाटो लगाउनु बढी उपयोगी हुन्छ । दिउँसो र राति लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगाउने क्रिम वा स्थानीय रूपमा उपयोग कुनै प्रक्रियालाई अपनाउनुपर्छ ।
दोस्रोपटक भए झन् खतरनाक
एकपटक डेंगु भइसकेकाहरूलाई अर्को पटक डेंगुको फरक भाइरसको संक्रमण हुँदा रोग कडा रूपमा देखिन सक्छ । डेंगुको डेन–१, डेन–२, डेन–३ र डेन–४ गरी ४ प्रकारका भाइरस हुन्छन् । एकपटक जुन सेरोटाइपको भाइरसको कारण बिरामी भइन्छ । अर्को पटक त्यही भाइरसविरुद्घ लड्न जीवनभर रोग प्रतिरोधक क्षमता तयार हुन्छ । उसो त रोग निको भएपछि अन्य सेरोटाइपका लागि ‘क्रस इम्युनिटी’ मात्र आंशिक र अस्थायी हुन्छ ।
डेंगुको अन्य सेरोटाइपद्वारा पछि संक्रमण हुँदा सिभियर डेंगु हुने जोखिममा वृद्घि हुन्छ । अर्थात् पहिलो पटकभन्दा फरक प्रकारको भाइरसले डेंगु उत्पन्न गरायो भने समस्या झन् गम्भीर हुन सक्छ ।
डेंगु सामान्यतः एक–दुई सातामा आफैं निको भइहाल्छ । यो रोगको उपचार गर्नका लागि कुनै विशिष्ट औषधि छैन । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले ‘पारासिटामोल’ औषधिको माध्यमले ज्वरो र दुखाइ नियन्त्रण लगायतका लाक्षणिक उपचारअन्तर्गत बिरामीमा देखिएको विभिन्न लक्षणको प्रबन्ध गर्छन् । यसमा आन्तरिक रक्तश्रावको जोखिम हुने भएकोले ‘एस्प्रिरिन’, ‘आइबुप्रोफेन’ आदि उपयोग गर्नु हुँदैन ।
सामान्य डेंगु भएकाहरूलाई निर्जलीकरण रोक्नका लागि बढी मात्रामा पानी लगायतका झोलिलो खानेकुरा, तरल पदार्थ सेवनसँगै आराम गर्ने सल्लाह दिइन्छ ।
रोग सार्ने लामखुट्टे
मुख्य रूपमा दिउँसो मात्र नभई राति पनि टोक्न सक्छ
अँध्यारो ठाउँमा बस्न रुचाउँछ
टेबुल, सोफामुनि, पर्दा पछाडि, घरका कुनामा बस्छ
आद्रता मन पराउँछ
यो भित्तामा आराम गर्छ
हरेक ४८ घण्टापछि टोक्न आउँछ
पोथीले मात्र रगत चुस्छ
रगत खान गाईभैंसी आदिलाई समेत टोक्छ
प्रजनन् स्थलभन्दा अधिकतम ५ सय मिटरसम्म टाढा जान सक्छ
यसको फुल एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म जीवित रहन्छ
यो एक ठाउँमा फुल नपारी थुप्रै ठाउँमा फुल पार्छ
एउटा लामखुट्टेले ७५ जना सम्मलाई डेंगु सार्न सक्छ
भाले लामखुट्टे एक साता बाँच्छ
पोथी लामखुट्टे एक महिनासम्म बाँच्छ
डेंगुको लक्षण देखिएको ३ देखि ७ दिनपछि
ज्वरो घट्दा देखिने खतराको संकेत
बिरामीलाई गम्भीर पेट दुखाइ वा निरन्तर वान्ता
छालामा रातो बिमिरा वा प्याच
नाक र गिजाबाट रक्तश्राव
रगतको वान्ता वा दिसामा रगत
तन्द्रा वा चिटचिढाहट
पहेंलो, रुखो, चिसो छाला
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०८:१४
डा. दिनेश न्यौपाने, डा. जनक ढकाल
कोरोना महामारी र भारत
अपडेटः आइतबार, १८ जेठ, २०७७ । २१ : ३० बजे